Però: Inona No Mamono Ireo ‘Feso’ Ao Amorontsiraka Avaratra? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 21 Oktobra 2017 15:29 GMT
Vakio amin'ny teny Français, English, বাংলা, Svenska, русский, Italiano, Català, Deutsch, 日本語, srpski, Español
Fantantsika fa anisan'ny zava-mananaina tena manan-tsaina indrindra eto amin'ny planeta ireo Feso. Vitsy biby mpiremby natoraly izy ireo sady miparitaka efa ho manerana ireo ranomasina eto ambonin'ny tany. Ao Però manokana, hita any amin'ireo faritra samihafa amorontsiraka izy ireo, eny amin'ireo torapasika midadasika ao Lima izay azo anaovana fikorisàna ambony ranomasina eny anilan'izy ireny, ao anaty valan-javaboaharim-pirenen'i Paracas na eny amorontsirak'i Piura, ao avaratr'i Però, izay ahafahana mahita azy ireo toy ireo trozona Jorobas.
Nitarika korontana ny vaovao milaza fa feso 3000 no hita maty tamin'ity taona ity teny amin'ireo morontsiraka avaratry ny firenena. Milaza i Carlos Yaipén-Llanos, talen'ny ORCA, fikambanana eo an-toerana miaro ny fiainana an-dranomasina, fa ireo fahafatesana ireo dia vokatry “ny feo migobona miforona mandritra ny fampiasana ireo fitaovana fikarohana any an-dranomasina lalina mba hitadiavana solika, entona ary ireo akora mineraly hafa.”
Milaza ny lahatsoratra an-gazety iray tany aloha fa ny fampiasana ny teknolojian'ny fitrandrahana fantatra amin'ny anarana hoe Sismique 3d izay miteraka ireo feo migobona be no nahavoa ireo feso. Tao Tumbes, avaratr'i Piura, mampiasa an'io fomba fitrandrahana io ny orinasa BPZ mba hahazoana angondrakitra mikasika ireo toerana azo itrandrahana entona sy solika. Nolavin'io orinasa io ny zavamisy hoe, noho ireo fitrandrahana nataony, misy ireo biby any an-dranomasina no maty saingy ao anatin'ny tatitra momba ny tontolo iainana, nolazainy fa io teknolojia io dia misy fiantraikany mihitsy.
Nanambara ny Filohan'ny Kongresy fa miandry ireo Minisitry ny Tontolo Iainana, ny Famokarana, ny Angovo sy ireo Harena Ankibon'ny Tany hitondra fanazavana mikasika io tranga io manoloana ny parlemanta izy. Media iray hafa milaza fa ny IMARPE , invontoerana momba ny any an-dranomasina ao Però, no tokony hampiseho tatitra iray ofisialy mikasika io olana io.
Hardy Jones, mpanao sarimihetsika sy mpikatroka iray mikasika ny fitehirizana ny fiainana an-dranomasina, mpamorona ny BlueVoice, no tonga tao Però rehefa avy nahafantarana momba ireo tatitra voalohany nataon'ny Dokotera Yaipén-Llanos tamin'ny 25 martsa 2012. Ny 27 martsa, nibitsika sahady mikasika ireo morontsiraka avaratry ny firenena izy:
Tao anatin'ny blaogin'i Blue Voice, nandefa ampahany iray avy amin'ny tatitry ny Dokotera Yaipén-Llanos izy avy eo:
Teo amin'ny Facebook, nizara ireo sary mikasika ny fikarohany ny ORCA. Nanadihady ny Dokotera Yaipén-Llanos ny fahitalavitra CNN, amin'ny fiteny espanola. Ny lahatsary manaraka dia lahatsary iray tamin'ny ampahan'ny dian'i Hardy Jones sy Carlos Yaipén-Llanos nanaraka ny morontsiraka avaratr'i Però.
Nanomboka tamin'izay fotoana izay, nampanantsoina ireo Minisitry ny tontolo Iainana sy ny Jono tamin'ny 10 Aprily mba hanome ireo fanazavana mety hifandraika amin'izay antony nahatonga ny fahafatesan'ireo feso ary momba ireo fitrandrahana solika. Tokony hitondra fanazavana ihany koa izy ireo mikasika ireo fepetra raisina mba hialàna amin'ny zavadoza mafimafy kokoa miantraika amin'ny tontolo iainanan'ny zava-mananaina an-dranomasina satria vinaniana ho 20 000 no isan'ireo feso, sy ireo karazana hafa, tandindonim-pahafatesana ary kasaina ny hanaovana ireo fitrandrahana manerana ny morontsiraka peroviana miaraka amin'ny teknolojia sismika 3d.
Ity lahatsoratra ity dia navoaka voalohany tao amin'ny bilaogy manokana an'i Juan Arellano.